Ọnwụ ịṅụbiga mmanya ókè ruru ọkwa ọhụrụ: 100,000 n'afọ gara aga na US
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ọnwụ ịṅụbiga mmanya ókè ruru ọkwa ọhụrụ: 100,000 n'afọ gara aga na US
Dị ka data ọhụrụ nke Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchịkwa Ọrịa si kwuo, ọnwụ ịṅụbiga mmanya ókè na United States karịrị 100,000 n'ime ọnwa 12 maka oge mbụ. Ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ n'ihe karịrị 29% n'afọ gara aga. A na-ewere data ahụ dị ka nwa oge mana ọ bụ amụma ihe ọnụọgụ ikpeazụ ga-egosi.
Ndị ọkachamara na-eche na ọrịa na-efe efe ekerewo òkè n'ịṅụ ọgwụ ọjọọ na ọnwụ na-arịwanye elu, ma ruo taa, ọ dịghị ihe àmà siri ike dị. Otú ọ dị, ihe ndị ọkachamara na-ekwu bụ na agụmakwụkwọ n'oge na mgbochi bụ isi ihe na-eme ka a gbanwee usoro ahụ.
Otu ihe mgbochi
Candor, nke na-enye ụmụ akwụkwọ nọ na klaasị 4 ruo 8 ọzụzụ gbasara ọgwụ ike na mmekọahụ, akwalitela ọdịnaya mmụta ọgwụ maka ụmụaka na ndị nne na nna. Usoro ọmụmụ ya 'Sayensị N'azụ Ọgwụ ọjọọ' na-aga n'ihu na-agbanwe agbanwe iji lebara ọnọdụ dị na iji ọgwụ eme ihe na mmegbu. Candor kwenyere na iso ndị nne na nna na-akparịta ụka na ụmụ ha gbasara ọgwụ ọjọọ na ahụike mmekọahụ na-eduga ná nhọrọ ndị ka mma.
Ndụmọdụ maka ndị nne na nna
• Bụrụ onye dị mfe ịbịaru nso ma malite mkparịta ụka - Ikwu okwu n'ime ụgbọ ala nwere ike ịbụ ebe dị mma karịa ikwu okwu - na ikwu banyere ya otu ugboro ezughị.
• Jiri akụkọ akụkọ malite mkparịta ụka - Mgbe ihe metụtara iji ọgwụ eme ihe nke ịdoụbiga mmanya ókè dị na akụkọ, jiri ya malite mkparịta ụka.
• Kesaa ụkpụrụ gị na atụmanya gị- Ihe #1 mere ụmụaka ji ekwu na ha anaghị aṅụ mmanya na ọgwụ ndị ọzọ bụ n'ihi na ndị mụrụ ha ga-enwe mmechuihu.
• Mepụta iwu doro anya - Ịmepụta iwu doro anya, nke a kapịrị ọnụ bụ ntọala maka mbọ nne na nna na mgbochi. Gị na nwa gị mepụta iwu ndị ahụ ma tinye ha n'ọrụ mgbe niile.
• Debe usoro ọgwụ - Ọ dị mkpa ịtụfu ọgwụ nke ọma n'oge.
• wulite mmekọrịta nne na nna / nwa - rie nri ọnụ mgbe ị nwere ike ma wepụ ngwá electronic na nri, ụlọ ihi ụra, na ihe omume ezinụlọ. Na-enwe mmasị n'ọdịmma nwa gị.
• Mara ndị enyi ha - Lezienụ anya na ndị gị na nwa gị na-akpakọrịta ma were ohere mee ka ndị mụrụ ha mata onwe gị. Bụrụ ụzọ mgbapụ ha.
• Mee ka nwa gị mara na ha nwere ike ịkpọ gị oge ọ bụla ka ọ bịa kpọta ha ma ọ bụ mgbe ọ nọ n'ọnọdụ nrụgide ndị ọgbọ. Ha nwere ike iji gị mee ihe ngọpụ mgbe niile.